यहोवाको मायाबारे मनन गर्नुहोस् | अध्ययन
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किसी कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“म तपाईंका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु।” —भज. ७७:१२, NRV.
गीत: १८, ६१
यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी किन पक्का छौं?
यहोवा हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार के छ?
हामी यहोवालाई माया गर्छौं भनेर कसरी देखाउन सक्छौं?
१, २. (क) यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं किन विश्वस्त हुनुहुन्छ? (ख) यहोवाले हामीलाई कुन आवश्यकतासहित सृष्टि गर्नुभएको छ?
के यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई माया गर्नुहुन्छ? यी उदाहरणहरू विचार गर्नुहोस्: मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीले टेलेनलाई यहोवाको सेवा गर्दा सकी नसकी गर्नु राम्रो होइन भनेर बारम्बार मायालु सल्लाह दिनु परेको थियो। उनी भन्छिन्‌: “मलाई माया गरेकोले नै यहोवाले यसरी सल्लाह दिनुभएको हो।” श्रीमान्‌ बितेपछि दुई छोराछोरीलाई एक्लैले हुर्काएकी ब्रिजट पनि यसो भन्छिन्‌: “सैतानको यो संसारमा छोराछोरी हुर्काउन साह्रै गाह्रो छ, एक्लैले गर्नुपऱ्यो भने त झनै गाह्रो। मैले धेरै दुःख झेल्नुपऱ्यो। तर यहोवाले मलाई सम्हाल्नुभयो। उहाँले मलाई सहनै नसक्ने परिस्थितिमा पर्न दिनुभएको छैन। उहाँ मलाई माया गर्नुहुन्छ।” (१ कोरि. १०:१३) स्यान्ड्रलाई कहिल्यै निको नहुने रोग लागेको छ। एकचोटिको कुरा हो, अधिवेशनमा एउटी बहिनी तिनलाई भेट्न आइन्‌। स्यान्ड्रको श्रीमान्‌ यसो भन्छन्‌: “ती बहिनीसित खासै चिनजान त थिएन। तैपनि उहाँ हामीसित कुराकानी गर्न आउनुभयो। हामीले धेरै प्रोत्साहन पायौं। हाम्रा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीको मुखबाट सान्त्वनाको दुई-चार शब्द सुन्दा मात्र पनि निक्कै फरक पर्दो रहेछ। साँच्चै! यहोवा हामीलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ।”
२ हामी अरूलाई माया गर्छौं अनि माया चाहन्छौं किनकि यहोवाले हामीलाई यस्तै आवश्यकतासहित सृष्टि गर्नुभएको छ। तर रोगबिमार वा आर्थिक समस्याले गर्दा, प्रचारकार्यमा सफल नहुँदा वा अन्य कारणले गर्दा हामी निराश हुन सक्छौं। यहोवाको माया नपाएको जस्तो लाग्दा कुन कुरा सम्झनुपर्छ? उहाँको लागि हामी बहुमूल्य छौं र उहाँले हामीलाई ‘दाहिने हात समातेर’ डोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सधैं मनमा राख्नुपर्छ। यहोवाको सेवा गरिरह्यौं भने उहाँ हामीलाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न।—यशै. ४१:१३; ४९:१५.
३. यहोवा हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार के छ?
३ माथि उल्लेख गरिएका साक्षीहरूले गाह्रोसाह्रो अवस्थामा यहोवा परमेश्वरले सम्हाल्नुभएको कुरा आफैले अनुभव गरे। तपाईंको पनि त्यस्तै अनुभव छ कि? (भज. ११८:६, ७) यी चारवटा कुराहरूले यहोवा हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ: (१) उहाँको सृष्टि (२) उहाँको वचन (३) प्रार्थनाको प्रबन्ध (४) फिरौतीको बलिदान। यहोवाले हाम्रो लागि गर्नुभएका सबै असल कुराबारे मनन गरौं। यसो गर्दा उहाँ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अझ धेरै आभारी हुन्छौं।—भजन ७७:११, १२, NRV पढ्नुहोस्।
यहोवाको सृष्टिबारे मनन गर्नुहोस्
४. यहोवाले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरू मनन गर्दा हामी कस्तो महसुस गर्छौं?
४ यहोवाले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरू मनन गर्दा उहाँ हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौं। (रोमी १:२०) यहोवाले पृथ्वीमा मानिसजातिलाई चाहिने सबै कुरा राखिदिनुभएको छ। उहाँ हामीले जीवनको भरपूर आनन्द उठाएको चाहनुहुन्छ। जस्तै: बाँच्नको लागि हामीलाई खानेकुरा चाहिन्छ। तर हाम्रो पेट भर्नको लागि मात्र यहोवाले हामीलाई खानेकुरा दिनुभएको होइन। उहाँ हामीले स्वाद लिंदै त्यसको आनन्द उठाएको चाहनुहुन्छ। (उप. ९:७) त्यसैले यहोवाले किसिम-किसिमका बोटबिरुवा र अन्नबाली उमार्ने क्षमतासहित यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको छ। क्यानाडाकी क्याथरिन सृष्टिमा भएका कुराहरू नियाल्न मन पराउँछिन्‌। खासगरि वसन्त ऋतुमा चारैतिर हरियाली छाउँदा खुबै रमाइलो मान्छिन्‌। उनी भन्छिन्‌: “नयाँ पालुवा पलाएको र रङ्गीबिरङ्गी फुलहरू फुलेको देख्दा मनै लोभिन्छ। हुलका हुल चराचुरुङ्गीहरू पनि यही मौसममा फर्कन्छन्‌। एउटा सानो चरा वर्षेनी यही समयमा मेरो घरबाहिर आउँछ अनि मैले भाँडामा राखिदिएको चारो खान्छ। कस्तो अचम्म! यहोवा परमेश्वर हामीले यस्ता कुराहरू हेरेर रमाएको चाहनुहुन्छ।” हो, यहोवा हामीलाई माया गर्ने बुबा हुनुहुन्छ र हामीले सृष्टिका कुराहरूबाट आनन्द उठाएको उहाँ चाहनुहुन्छ।—प्रेषि. १४:१६, १७.
५. मानिसलाई सृष्टि गरिएको तरिकामा यहोवाको माया कसरी झल्किन्छ?
५ मानिसहरूले आफ्नो कामबाट आनन्द उठाउन सक्छन्‌। यस्तो क्षमतासहित यहोवाले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। (उप. २:२४) मानिसहरूले पृथ्वी भरिएको, पृथ्वीमाथि अधिकार गरेको अनि पशुपन्छी र अन्य जीवजन्तुलाई आफ्नो अधीनमा राखेको यहोवा चाहनुहुन्थ्यो र यी कामहरू गर्दा मानिसहरू आनन्दित हुन सक्थे। (उत्प. १:२६-२८) साथै, यहोवाले हामीमा थुप्रै असल गुणहरू राखिदिनुभएको छ, जसले गर्दा हामी उहाँको अनुसरण गर्न सक्छौं। के यसमा पनि यहोवाको माया झल्किंदैन र?—एफि. ५:१.
यहोवाको वचनको कदर गर्नुहोस्
६. हामीले किन परमेश्वरको वचनको कदर गर्नुपर्छ?
६ यहोवा हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई आफ्नो वचन दिनुभएको छ। बाइबलबाट हामी यहोवाबारे धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं; साथै मानिसहरूसित उहाँले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि थाह पाउन सक्छौं। जस्तै: उहाँको आज्ञा बारम्बार तोड्ने इस्राएलीहरूसित यहोवाले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर बाइबलमा बताइएको छ। त्यसबारे भजन ७८:३८ मा यस्तो लेखिएको छ: “उहाँचाहिं दयामा पूर्ण भएको हुनाले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट गर्नुभएन। धेरै पल्ट उहाँले आफ्नो रिस मार्दै रहनुभयो र उहाँले आफ्नो सबै क्रोध पोखाउनुभएन।” यस पदबारे मनन गर्दा यहोवा आफ्ना सेवकहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र ख्याल राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। हो, यहोवाको नजरमा तपाईं बहुमूल्य हुनुहुन्छ।—१ पत्रुस ५:६, ७ पढ्नुहोस्।
७. हाम्रो लागि बाइबल किन अनमोल छ?
७ आमाबुबा र छोराछोरीबीच खुलस्त कुराकानी हुन्छ भने एकअर्कालाई अझ धेरै माया र भरोसा गर्न सक्छन्‌। हाम्रा मायालु बुबा यहोवालाई हामीले देखेका छैनौं अनि उहाँको स्वर पनि सुनेका छैनौं। तर उहाँ बाइबलमार्फत हामीसित बोल्नुहुन्छ र हामीले उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ। (यशै. ३०:२०, २१) हाम्रो लागि बाइबल अनमोल छ। यहोवा हामीलाई सही बाटोमा डोऱ्याउनुहुन्छ र खतराबाट जोगाउनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई राम्ररी चिनेको र भरोसा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ।—भजन १९:७-११; हितोपदेश १:३३ पढ्नुहोस्।
यहोशापातलाई येहूमार्फत सल्लाह दिनुपरे तापनि यहोवाले तिनमा भएको “असल कुरो” हेर्नुभयो (अनुच्छेद ८, ९ हेर्नुहोस्)
८, ९. हामीले कुन कुरा बुझेको यहोवा चाहनुहुन्छ? बाइबलको एउटा उदाहरण दिनुहोस्।
८ यहोवा हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र उहाँ हाम्रो कमीकमजोरी होइन, हामीमा भएको राम्रो कुरा हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको यहोवा चाहनुहुन्छ। (२ इति. १६:९) यहूदाका राजा यहोशापातबारे विचार गरौं। एकपटक यहोशापातले इस्राएलका खराब राजा आहाबलाई अरामीहरूसितको लडाइँमा साथ दिने गलत निर्णय गरे। चार सय जना झूटा भविष्यवक्ताहरूले त्यस लडाइँमा आहाबको जित हुन्छ भने। तर भविष्यवक्ता मीकायाले चाहिं लडाइँमा हार हुनेछ भने। लडाइँमा आहाबको मृत्यु भयो र यहोशापातचाहिं मृत्युको मुखमै परेर बाँचे। यहोशापात यरूशलेम फर्केपछि यहोवाले तिनलाई सच्याउनुभयो। तिनले गल्ती गरेको भए पनि यहोवाले तिनमा भएको “असल कुरो” बिर्सनुभएको थिएन।—२ इति. १८:४, ५, १८-२२, ३३, ३४; १९:१-३.
९ आफ्नो शासनको सुरुतिर यहोशापातले व्यवस्थाबारे सिकाउन राजकुमारहरू, लेवीहरू र पुजारीहरूलाई यहूदाका सहरहरूमा पठाए। त्यो अभियान धेरै प्रभावकारी भयो; वरपरको राष्ट्रका मानिसहरूले समेत यहोवाको डर मान्न थाले। (२ इति. १७:३-१०) यहोशापातले मूर्ख काम गरेको भए तापनि तिनले गरेका असल कामहरूमा यहोवाले ध्यान दिनुभयो। हामीमा पनि विभिन्न कमीकमजोरी हुन सक्छ। तर यहोवालाई खुसी बनाउने प्रयास गऱ्यौं भने उहाँले हामीलाई सधैं माया गर्नुहुनेछ।
प्रार्थना गर्ने सुअवसरको कदर गर्नुहोस्
१०, ११. (क) प्रार्थना किन मायालु प्रबन्ध हो? (ख) यहोवाले कसरी हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ? (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्)
१० छोराछोरी कुरा गर्न आउँदा असल बुबाले ध्यान दिएर सुन्छन्‌। तिनले छोराछोरीको ख्याल गर्ने भएकोले उनीहरूलाई के कुरामा चिन्ता लागेको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्छन्‌। हाम्रा मायालु बुबा यहोवाले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा उहाँ हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। प्रार्थनाद्वारा यहोवासित कुरा गर्न पाउनु ठूलो सुअवसर हो।
११ यहोवासित हामी जहिले पनि कुरा गर्न सक्छौं। उहाँ हाम्रो साथी भएकोले हाम्रो कुरा सुन्न सधैं तयार हुनुहुन्छ। माथि उल्लेख गरिएको टेलेन यसो भन्छिन्‌: “तपाईं यहोवालाई आफ्नो मनको सबै कुरा बताउन सक्नुहुन्छ।” यहोवालाई आफ्नो मनको कुरा खुलस्त बतायौं भने उहाँले बाइबल, प्रकाशनमा छापिएका लेखहरू वा मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीमार्फत प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। हाम्रो मनको कुरा अरू कसैले नबुझे पनि उहाँले भने राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। हामीलाई धेरै माया गरेकोले उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको हो।
१२. बाइबलमा लेखिएका प्रार्थनाहरूबारे मनन गर्दा कस्तो फाइदा हुन्छ? उदाहरण दिनुहोस्।
१२ बाइबलमा लेखिएका प्रार्थनाहरू पढ्दा हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौं। पारिवारिक उपासनामा त्यस्ता प्रार्थनाहरूबारे छलफल गऱ्यौं भने धेरै लाभ उठाउँछौं। विगतका यहोवाका सेवकहरूले यहोवालाई आफ्नो भित्री भावना पोखाएका विवरणहरू मनन गऱ्यौं भने हामी पनि त्यसै गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं। जस्तै: माछाको पेटमा हुँदा योनाले यहोवासित क्षमा माग्दै प्रार्थना गरेको विवरण सम्झनुहोस्। (योना १:१७–२:१०) मन्दिर समर्पणको बेला सुलेमानले यहोवालाई मनैदेखि प्रार्थना गरेको विवरण पनि विचार गर्नुहोस्। (१ राजा ८:२२-५३) साथै येशूले सिकाउनुभएको नमुना प्रार्थनाबारे पनि मनन गर्नुहोस्। (मत्ती ६:९-१३) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, “आफ्नो निवेदन परमेश्वरसमक्ष जाहेर” गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने “परमेश्वरको शान्ति, जुन सम्पूर्ण मानव विचारभन्दा उत्कृष्ट छ, त्यसले ख्रीष्ट येशूद्वारा” तपाईंको “मन र सोच्ने क्षमताको रक्षा गर्नेछ।” अनि यहोवाको माया पाएकोमा उहाँप्रति सधैं आभारी हुन सक्नुहुनेछ।—फिलि. ४:६, ७.
फिरौतीको लागि धन्यवादी हुनुहोस्
१३. फिरौतीको प्रबन्धले गर्दा मानवजातिले कस्तो मौका पाएका छन्‌?
१३ हामीलाई असाध्यै माया गर्ने भएकोले नै यहोवाले येशूको बलिदानको प्रबन्ध मिलाउनुभयो र यही प्रबन्धले गर्दा ‘हामीले जीवन पाउन’ सम्भव भयो। (१ यूह. ४:९) यसबारे पावलले यस्तो लेखे: “अभक्त मानिसहरूको निम्ति ख्रीष्ट तोकिएको समयमा मर्नुभयो। हुन पनि, भला मानिसको निम्ति ज्यान दिन हिम्मत गर्ने कोही निस्के तापनि कर्तव्यपरायण मानिसको निम्ति आफ्नो ज्यान दिने सायदै कोही होला। तर हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र यसरी परमेश्वरले हामीप्रतिको आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो।” (रोमी ५:६-८) यस्तो मायालु प्रबन्धले गर्दा सम्पूर्ण मानवजातिले यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध गाँस्ने मौका पाएका छन्‌।
१४, १५. फिरौतीको बलिदानले यी दुई समूहलाई कस्तो लाभ पुऱ्याउँछ: (क) अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरू (ख) पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्ने आशा पाएकाहरू
१४ अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरूले विशेष तरिकामा यहोवाको माया अनुभव गर्छन्‌। (यूह. १:१२, १३; ३:५-७) पवित्र शक्तिद्वारा अभिषेक गरिएकोले तिनीहरू “परमेश्वरका सन्तान” भएका छन्‌। (रोमी ८:१५, १६) केही अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरू अझै पनि पृथ्वीमा छन्‌, तैपनि ‘परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वर्गमा बसालिसक्नुभयो’ भनेर पावलले किन लेखे? (एफि. २:६) किनकि ‘तिनीहरूमाथि पवित्र शक्तिद्वारा छाप लगाइएको छ, जुन तिनीहरूले पाउने उत्तराधिकारको बैनाको रूपमा परमेश्वरले दिनुभयो’ र त्यो उत्तराधिकार भनेको ‘स्वर्गमा तिनीहरूको लागि साँचेर राखिएको आशा हो।’—एफि. १:१३, १४; कल. १:५.
१५ फिरौतीको बलिदानमा विश्वास गर्ने अरू थुप्रै मानिसले यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध गाँस्ने मौका पाएका छन्‌। तिनीहरूलाई यहोवाले आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार्नुहुनेछ र सुन्दर पृथ्वीमा अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। फिरौतीको बलिदान यहोवा सबै मानिसजातिलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। (यूह. ३:१६) पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्ने आशालाई पक्रिराख्यौं र वफादार भई यहोवाको सेवा गरिरह्यौं भने नयाँ संसारमा हाम्रो जीवन खुसीले भरिनेछ। त्यसैले फिरौतीको प्रबन्धलाई कदर गरेको देखाइरहौं।
यहोवालाई सधैं माया गर्नुहोस्
१६. यहोवाको मायाबारे मनन गर्दा हामी के गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं?
१६ यहोवाले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको थुप्रै प्रमाण छ। भजनरचयिता दाऊदले यसरी गाए: “मेरो निम्ति तपाईंका विचारहरू कति अमूल्य छन्‌। तिनीहरूको सङ्ख्याको सार कति ठूलो छ। तिनीहरूलाई गनें भने, ती बालुवाका सङ्ख्याभन्दा बढी छन्‌।” (भज. १३९:१७, १८) यहोवाले हामीलाई के-कस्तो तरिकामा माया गर्नुभएको छ भनेर मनन गर्दा हामी उहाँलाई माया गर्न र तनमनको सेवा चढाउन उत्प्रेरित हुन्छौं।
१७, १८. यहोवालाई माया गर्छौं भनेर देखाउने केही तरिकाबारे बताउनुहोस्।
१७ यहोवालाई माया गरेको कुरा हामी विभिन्न तरिकामा देखाउन सक्छौं। उदाहरणको लागि, प्रचारकार्यमा जोसिलो भएर परमेश्वर र छिमेकीलाई माया गर्न सक्छौं। (मत्ती २४:१४; २८:१९, २०) जतिसुकै गाह्रो परिस्थिति आए पनि यहोवाको सेवा गर्न नछोडेर हामी उहाँलाई माया गरिरहन्छौं। (भजन ८४:११; याकूब १:२-५ पढ्नुहोस्) उम्कनै नसकिने जस्तो परिस्थितिमा पनि यहोवा हाम्रो दुःख बुझ्नुहुन्छ र हामीलाई मदत गर्नुहुन्छ। किनकि हामी उहाँको नजरमा अनमोल छौं।—भज. ५६:८.
१८ हामी यहोवालाई माया गर्छौं। त्यसैले उहाँको सृष्टि र उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू मनन गर्छौं। साथै दिनहुँ बाइबल पढेर परमेश्वरको वचनको कदर गर्छौं अनि प्रार्थनाद्वारा उहाँको नजिक जान्छौं। हामीलाई पापबाट छुटाउन उहाँले मिलाउनुभएको फिरौतीको प्रबन्धबारे मनन गर्दा यहोवालाई अझ धेरै माया गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं। (१ यूह. २:१, २) यहोवालाई माया गर्नुपर्ने थुप्रै कारण भएकोले उहाँलाई सधैंभरि माया गरिरहौं।